Izindaba - Amabhokisi e-Custom Luxury Gift Rigid
Liyini Ibhokisi Eliqinile?
Amabhokisi aqinile angesinye sezigaba ezifunwa kakhulu emabhokisini okupakisha. Cishe yonke imikhiqizo yokunethezeka isebenzisa ukupakisha okuqinile ngezindatshana zazo ezibizayo nezintekenteke. Ukupakisha ibhokisi okuqinile kuyaziwa ngokuqina kwayo, ukuthembeka kwayo, amandla ayo, nokuqina kwayo. La ma-dielectri wamabhokisi aqinile ngokwezifiso agxila ephepheni lokusonga elifakwe ngaphandle kwe-chipboard esindayo (iphaneli elimpunga) elinikeza amabhokisi ukwakheka kwawo. Lawa mabhokisi angaphakathi aqinile aqukethe ulwelwesi lwephepha lokugcina ukubukeka okufanayo ngomuzwa wokuveza. Ukuze ube nesipiliyoni esihle sokupakisha, singaphakamisa ukuthi uhlale uprinta ama-dielectric ngaphambi kokuthuthuka. Lokhu kuzokunikeza umbono mayelana nobukhulu, ubukhulu, ulwazi lomsebenzisi, njll. Ngaphezu kwalokho, uzoqonda nokuthi ibhokisi lihlangabezana nezidingo zakho zesakhiwo noma cha.
Yini okuhlinzekwa ibhokisi elinamandla?
Amabhokisi aqinile ngokwezifiso anikela ngayo yonke inkululeko engenzeka yokwakha ukupakisha okwenziwe ngezifiso. Ukusuka ekuvalweni ukufaka izingxenye kusekelo lwangaphakathi nezinketho zomhlangano, uthola inkululeko yokwenza ngezifiso zonke izici. Amabhokisi we-Custom Printed Rigid anezinzuzo ezinkulu njengesixazululo sokupakisha, ngakho-ke, wonke umkhiqizo ukhetha ukusebenzisa la mabhokisi aphrintiwe ngokwezifiso. Kodwa-ke, zikanokusho abambalwa abakwazi ukuzithenga. Lawa mabhokisi aqinile ngokwezifiso ahlinzeka ngokuvikelwa okukhulu nokuvikeleka. Umkhiqizo wakho uhlala uphephile uma ukulebhokisi. Ngaphezu kwalokho, amaklayenti akho ahlangabezana nokuhlangenwe nakho okunethezeka kakhulu nokuthakazelisa kwamakhasimende. Qaphela ukuthi wonke amabhokisi anqabile okunethezeka atholakala emabhokisini angaphambi kokusikwa.
Ukusetshenziswa okujwayelekile kwamabhokisi aqinile
Inzuzo ephezulu yamabhokisi aqinile e-Luxury ukuthi enziwa ngezifiso kalula. Ungaphrinta konke kusuka kumalogo kuya kumagama womkhiqizo kuya kuma-silhouettes wesithombe sakho somkhiqizo. Lawa mabhokisi e-Luxury aqinile angabhekana nazo zonke izici zomkhakha wokuphrinta. Nawa amaphuzu ayisihluthulelo nezinzuzo zamabhokisi aqinile e-Luxury: Ukuphrinta kombala kuyatholakala, Ukubekisa, ukugxusha, nokunye. Akunandaba ukuthi indawo esetshenzisiwe (ukwenza ngokwezifiso kubo bonke ubuso obukhona) Indlela yokulethwa nokuhlanganiswa kwamabhokisi aqinile ihlanganiswe ngokuphelele noma ngokwengxenye. Kutholakala kuzo zonke izinhlobo nezitayela ongazicabanga
Isiphetho esenziwe ngezifiso sezinga eliphezulu .Ingahlotshiswa ngezesekeli ezinjengamaribhoni njll. Ziyisixazululo esihle kakhulu sokwethula imikhiqizo esezingeni eliphakeme nokunikeza ukubukeka okuhle ku-package. Imikhiqizo ingasebenzisa amabhokisi ethu aqinile we-Luxury ukubonisa kanye nobucwebe bepakethe, amakha, amawashi, okokugqoka, ushokoledi, izipho nezinye izimpahla zikanokusho. Ibhokisi elethwe lihlanganisiwe. Kukhona izinzuzo zokuthola amabhokisi ahlanganisiwe njengokuzama okuncane nesikhathi esichithwa ekuhlanganiseni ngemuva kokuthola. Kodwa-ke, ngamabhokisi ahlanganisiwe, udinga ukugcina engqondweni usayizi we-oda lakho njengoba ivolumu ingaba namandla. Amabhokisi e-Magnetic aqinile, Amabhokisi e-Rigid Drawer, Amabhokisi e-Rigid anesivalo, Amabhokisi aqinile e-Foldable, Amabhokisi aqinile ahanjiswe amatafula, aqinile Amabhokisi we-pop-up, Kungcono uku-oda amabhokisi ayizicaba njengoba amabhokisi ezipho ahlanganisiwe evame ukuba mkhulu kakhulu ukuwagcina. Amabhokisi amaflethi kufanele ahlangane ngendaba yemizuzu futhi kulula nokuwagcina uma kuqhathaniswa namabhokisi aqinile ahlanganisiwe.
Izitayela zamabhokisi aqinile
Ukufakwa okuqinile kwebhokisi kuza ngezindlela ezahlukahlukene nezindlela. Ukukhethwa kwesitayela sokuma nokuklama kuncike kuwe futhi ngokuya ngokuhlonishwa komkhiqizo wakho. Sizoxoxa ngezitayela ezimbalwa ezibalulekile kuzixazululo eziqinile zokupakisha. Ibhokisi eliqinile elinesivalo sokuvala kazibuthe Uyini umkhuba wokupakisha kwe-e-commerce? Ibhokisi eliqinile elinesivalo sokuvala kazibuthe. Idizayini eyinkimbinkimbi enamaphakethe ebhokisi aqinile aqediwe ahlinzeka ngokuhlangenwe nakho kwezwe kumakhasimende. Ibhokisi eliqinile elibushelelezi elinesembozo sokuvala kazibuthe yisisombululo sokupakisha okufanele ube nalo kulo lonke ibhizinisi elisebenzelana namakhasimende ekilasi elite. Ungaba nesiphetho se-matte noma esicwebezelayo, uphawu lwenkampani yakho olubunjiwe noma olushisayo ngaphambili nangaphezulu, yenza okudala ngokwengeziwe ngemibala oyikhethayo. Amabhokisi ama-magnetic rigidable noma amabhokisi kazibuthe agoqekayo aya ngokwanda kulezi zinsuku. Ababizi, uma kuqhathaniswa nebhokisi eliqinile elinesivalo sokuvalwa kukazibuthe. Njengenkampani yokungenisa, umuntu angonga kakhulu ngokushintshela kumabhokisi kazibuthe agoqekayo. Ubuchwepheshe bethu bulele ngezitayela ezimbili ezithandwayo futhi zombili zingakwazi ukwamukela zonke izinhlobo zokwenza ngezifiso nokwenza ngokwezifiso. Amabhokisi aqinile agoqekayo alula kakhulu ukuwathengisa futhi kulula ukuwahlanganisa. Awudingi isikhathi esiningi ukuyilungiselela amakhasimende. Zizwe ukhululekile ukusazisa uma udinga isiphakamiso sochwepheshe maqondana nesixazululo sokupakisha iphepha. Ibhokisi eliqinile lezimonyo. Imiklamo yokupakisha yangokwezifiso nayo iyafakwa. Ikhasimende lethu lithanda itimu elula nemsulwa yezixazululo zabo zokupakisha zezimonyo, ngakho-ke bakhetha imidwebo emhlophe qwa yamadrawer. I-UV emhlophe emhlophe ecwebezelayo ifana kahle nemikhiqizo yabo yemvelo futhi enobungani bemvelo. Omunye wemiklamo enomthelela omkhulu kulawa mabhokisi aqinile ukuthi ube namabhande angaphandle ngokuphrinta okuhlukile kwe-CMYK. Umklamo wokuphrinta wenza amabhokisi wokugcina abe mnandi, amasha futhi anamandla azodonsa ukunaka kwabantu abanakekela ukubukeka kwabo. Amabhokisi we-Custom Rigid ahlinzeka ngokuhlukahluka kumkhiqizo wakho ukugcina umkhiqizo ekukhanyeni nakwezinye izinto zemvelo kanye nokuphepha nokuvikelwa emabhodleleni akho engilazi. Amabhokisi e-jewelry aqinile Amabhokisi ayindilinga e-Custom jewelry ayizicucu zokupakishwa komklami wohlobo lomhlobiso wobucwebe. Izinto ezingaphakathi amacici, imigexo, namasongo, imihlobiso elengayo. Wonke amabhokisi aqukethe okufakwayo okumnyama okususwayo okubonisa umkhiqizo. Ungenza ngendlela oyifisayo umklamo wakho ngombala, ilogo impahla, bese uqeda. Ukumaka Okushisayo noma i-Spot UV ekugqamiseni umkhiqizo wakho usebenzisa iphepha elinyathelisiwe elenziwe ngephethini yombala ibhokisi lesipho lesitayela sebhokisi lomdlalo libukeka ngendlela ehlukile. Ungasebenzisa amaribhoni njengesisekeli sebhokisi lakho lokupakisha eliqinile. Lawa malibhoni atholakala ngayo yonke imibala namathoni. Sibheke phambili ukukunikeza izixazululo zokupakisha ezenziwe ngezifiso. Amabhokisi wesipho aqinile ngokwezifiso. Amabhokisi ezipho aqinile ngokwezifiso adingeka kakhulu kulezo zinkampani ezidinga amabhokisi okupakisha aqinile futhi aqinile emikhiqizo yazo. Yize benesimo esihle, amabhokisi ethu ezipho aqinile angakwazi ukuphatha izinsimbi ezisindayo ngenxa yesakhiwo esiqinile. Ukusetshenziswa okuyisisekelo kwebhokisi eliqinile ukunikeza ubuhle kumkhiqizo. Hhayi lokho kuphela kodwa futhi kuhle ukuhlaba umxhwele amakhasimende ngendlela eyinkimbinkimbi. Dala isithombe somkhiqizo ngokusebenzisa osayizi abahlukahlukene nemilo yemikhiqizo ehlukile. Amabhokisi aqinile aqinile ahamba phambili kulezi zinsuku. Lokhu akulula ukugcina kuphela, kodwa futhi kulula ukuhlangana. Ngakho-ke, zifunwa kakhulu. Izinkampani eziningi zokupakisha eziqinile zibheke ukuhlinzeka amakhasimende azo ngesipiliyoni esingahlanganyela nabanye. Ibhokisi lamakhandlela eliqinile, amabhokisi wesipho aqinile anesembozo, amabhokisi aqinile aqinile anezindwangu, futhi uzibuthe ayizixazululo zokupakisha zakho. Unga-oda amabhokisi wesipho aqinile ngamanani ashibhile nge-Blue Box Packaging.
Amabhokisi ushokoledi aqinile ngokwezifiso
Ubani endaweni yonke ongayithandi ushokoledi? Sebenzisa amabhokisi eshokoledi aqinile ngokwezifiso ukwenza umkhiqizo wakho ugqame emashalofini wanoma yisiphi isitolo. Lawa mabhokisi ashokoledi aqinile ahlinzekwa ngobuhle nomusa. Ngaphezu kwalokho, ungangeza ukuthandeka nokubaluleka kumkhiqizo wakho. Umkhiqizo wakho ongajwayelekile ubukeka umangalisa ngokwengeziwe kula mabhokisi kanokusho. Ukuklanywa kwala mabhokisi aqinile kuncike kuwe. Uzimisele kangakanani ukuthatha umkhiqizo wakho? Ubaluleke kangakanani lo mkhiqizo kuwe? Ngokuhambisana nalesi sixazululo sokupakisha, ungakha ukuqwashisa komkhiqizo bese uphoqa amakhasimende amaningi ukuthi athenge umkhiqizo wakho. URaymin Display ubekhonza ngokuziqhenya ngamakhasimende akhe kimi ngaphezu kweminyaka eyishumi. Sisebenza njengomhlinzeki othembekile wesixazululo sokupakisha ezinkampanini eziningi zokupakisha eziqinile. Ithimba lethu labadwebi bezithombe abanolwazi nabanekhono lihlale lilapha ukukusiza ngemiklamo yakho yokudala. Uma usuvele unomklamo wokupakisha kwakho okuqinile, singakwenza kube ngcono kuwe. Ochwepheshe bethu bangenza imiklamo yakho iphile. Ngokushesha nje lapho uqinisekisa ukuklanywa kwakho, ukufakwa kwakho kuzofakwa ekukhiqizweni. Ezinsukwini ezimbalwa uzobe usupakishwa emnyango wakho. Ukupakisha okuhle kubalulekile kumkhiqizo wakho. Inikeza isithunzi nobuhle kanye nokudla okumnandi kumkhiqizo wakho. Xhumana nabachwepheshe bethu bokuthengisa namuhla ngesilinganiso sakho futhi bazokunikeza intengo yokupakisha engabizi kakhulu kuwe. Isibhakabhaka umkhawulo wamabhokisi aqinile njengoba efeza izinhloso eziningana. Ukuguquguquka kwazo kuyisudi yazo eqinile. Umcabango wakho kuphela ongabeka umkhawulo kulawa mabhokisi okunethezeka. Into enhle ukuthi ungathola amabhokisi aqinile ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho kanye nokuncamelayo.
Amabhokisi aqinile ebhizinisi
Amanye amabhizinisi afuna ukunika izipho amakhasimende awo. Kodwa-ke, bafuna ukuthi kube nokupakisha okungagcini nje ngokuhlaba umxhwele amaklayenti abo kepha futhi okufeza injongo. Babheka izixazululo ezisimeme okunzima ukuzilahla kanye nokukhohlwa. Qaphela futhi uthakazelise amaklayenti akho ngamabhokisi ethu aqinile aqinile. Yenza umkhiqizo wakho ubonakale ngokwengeziwe ngokwenza i-logo yakho kuwo wonke amabhokisi.
Thola amanani ashibhile ngokwezifiso
Abantu banombono oyiphutha ngokujwayelekile wokuthi abahlinzeki bamabhokisi abaqinile bakhokhisa imali eningi yokwenza ngokwezifiso. Nokho, lokho akulona iqiniso; ngokungahambisani nemibono eyiphutha edumile, ayabizi kakhulu. I-Blue Box Packaging inikeza izixazululo ezizinzile, ezingabizi futhi ezenziwe ngokwezifiso kuyo yonke imikhiqizo. Kuyindlela yakho yokuma ngaphandle kwesixuku futhi wenze okuthile okuhlukile ngempela kumakhasimende wakho okuzobayenga ukuthi baphinde bavakashele indawo yakho oyithengisayo. Uma ufuna isivumelwano esingabizi, oda inani eliningi. Uku-oda ngaleyo ndlela kuzokusiza ukuthi uthole okunye ukwehliswa kwentengo. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi uhlala unamabhokisi ezipho atholakalayo wokunikezela.
Enza ngendlela oyifisayo amabhokisi aqinile kunoma yisiphi isenzakalo
Kukhona ukuthambekela okwandayo kwamabhokisi ezipho enziwe ngezifiso emishadweni, ezinsukwini zokuzalwa, emaphathini, ekuhlanganeni ndawonye, ​​ekuhlanganyeleni, ekuhlanganyeleni, ezikhunjulweni, nakuzo zonke ezinye izinhlobo zezikhathi. Uma uhlela umcimbi wakho ngaphambi kwesikhathi, unga-oda amabhokisi wezipho eziqinile kusengaphambili kusuka ku-Blue Box Packaging futhi wenze umcimbi wakho ube owomusa ngokwenziwa kwawo okuhlukile kwamabhokisi wokupha. Ukusetshenziswa okuningi kwamabhokisi aqinile. Kunokusetshenziswa okungenakubalwa kwamabhokisi aqinile. Yenza ngokwezifiso futhi usebenzise njengokuthanda kwakho. Njengoba sishilo ekuqaleni, isibhakabhaka ngumkhawulo wamabhokisi la. Ungawasebenzisa njengamabhokisi ezipho ezingubo eziqinile, amabhokisi ezipho eziqinile, amabhokisi ehembe aqinile, amabhokisi okupakisha okunethezeka, amabhokisi ezipho zomshado aqinile, noma yini enye. Ibhokisi eliqinile elimnyama lithandwa kakhulu kumakhasimende ethu. Noma kunjalo, ungathola futhi okumhlophe, nsundu, nanoma yimuphi omunye umbala owuthandayo. Usayizi nokuma kuzosuselwa kokukhethayo nakwintandokazi yakho. Ngale ndlela, ungathola amabhokisi aqinile kwanoma yiluphi uhlobo ahlangabezana nezidingo zakho. Kubiza malini ukwenza ngokwezifiso? Lona ngumbuzo ovame kakhulu ezingqondweni zamakhasimende eziwagcina enziwe ngokwezifiso. Yebo, ukuthola impendulo yalo mbuzo akukaze kube lula. Ungagcwalisa ifomu elisheshayo online bese ukhetha izinketho ngokuya ngokuthanda kwakho. Uma usuqedile, uzoba ngokuchofoza okukodwa ekutholeni ukuthi kuzokubiza malini. Letha isigaba kumkhiqizo wakho ngokusebenzisa amabhokisi aqinile anamabhodlela avela ku-Blue Box Packaging!